Boliiska: Waxaa jira xiriir ka dhexeeya dilal ka dhacay Malmö - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Boliiska: Waxaa jira xiriir ka dhexeeya dilal ka dhacay Malmö
La daabacay fredag 31 mars 2017 kl 13.28
Malmö: Toddoba ruux oo xorriyaddii laga xayuubiyey
Dilkii shannaad ayaa illaa iyo hadda sannadka 2017 ka dhacay. sawir: BjÃ¶rn Lindgren/TT
Toddoba ruux ayaa xabsiga la dhigey, middaasina oo ka dambeeysay tuhun looga qabo dilkii wiil 23-jir ah oo fiid-nimadii khamiistii shalayto lagu xabbadeeyey xaafadda Rosengård. Waxaa iyaduna jirta tuhun laga qabo inuu dilkaasi xiriir la leeyahay dil horay uga dhacay magaalada Malmö, sida uu sheegay af-hayeenka ciidanka ammaanka Lars Förstell.
Sida ey qoreen war-geeysyada Aftonbladet iyo Sydsvenskan iyaga oo markhaati ka dhiganeya boliiska in 23-jirka la dilay shalay uu markhaati goob-joog ah ka ahaa dilkii wiil 16-jir oo hadda ka hor lagu toogtay goob basaska laga raaco ee xaafadda Rosengård.
Shir jaraa’id oo uu ciidanka ammaanku qabtay jimcadii maanta ayuu Lars Förstell ku sheegay sababta gacanta loogu dhigey toddobada ruux oo wareeysiyo lala yeelan doono.
– Waxaa middaa ugu wacnaa howshii aannu xalay fiid-nimadii qabaney iyo war-bixinno horey looga heley dhacdooyin kale oo muujiyey iney xiriirro jiraan ka dhexeeya, sida uu sheegay Förstell oo dhanka kale ka gaabsady inuu faahfaahiyo xiriirka ka dhexeeya.
Fiid-nimadii xalay, saacaddu kolkay ahayd 19:00 ayay ciidanka ammaanka soo gaartay qeylo-dhaan iyo in xabbado ey ka dheceen waddada Ramels väg.
– Kolkii aannu goobta tagney ayaannu ka war-helney inuu jiro ruux xabbado lagu dhaawacay oo cusbitalka loogu qaadey gaari mulki loo leeyahay, sida uu sheegay Fredrik Bratt oo ka howl-gala ciidanka ammaanka magaalada Malmö.
Muddo yar dabadeed ayey soo shaac baxday inuu 23-jirkii la dhaawacay uu cusbitalka ku geeriyooday.
Ciidanka ammaanka ayaa isbaaro dhigay goobtii uu falku ka dhacay baaristiisiina guda galey iyadoona saaka arroor-nimadii lagau dhawaaqey inuu toddoba ruux xorriyaddii laga qaadey oo xabsiga loo taxaabey.